LG G2 ကို Android Lollipop သို့အဆင့်မြှင့်တင်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း Androidsis
ဒီလက်တွေ့ကျသင်ခန်းစာအသစ်မှာမင်းကိုပြမယ် LG G2 ကိုတရားဝင် Android Lollipop သို့အဆင့်မြှင့်တင်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည် ၏အသင်းကချက်ပြုတ်နေတဲ့စိတ်လှုပ်ရှား Rom မှတဆင့် Evomagixလုံးဝအပေါ်အခြေခံပြီး LG ၏ကိုယ်ပိုင် Android Lollipop ကို၎င်း၏ v30 ဗားရှင်းတွင်သိုလှောင်ထားပါ.
LG G2 အတွက်အကောင်းဆုံးသောဤစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသော Rom ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များအားလုံးကို၎င်းတို့ထဲတွင်တွေ့နိုင်သည် တရားဝင် HTC Mania ဖိုရမ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီကနေ Androidsis ပါ ဒီစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ Android စားဖိုမှူးအဖွဲ့ကိုကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။ ဒီသင်ခန်းစာကိုငါရှင်းပြမယ့်နေရာမှာထုတ်ဝေပါ Rom ၏မှန်ကန်သောတပ်ဆင်မှုအတွက်လိုက်နာရန်အဆင့်များ.
1 ဤနည်းလမ်းသည် LG G2 ကို Android Lollipop သို့အဆင့်မြှင့်တင်ရန်အဘယ်ကြောင့်အကောင်းဆုံးနည်းဖြစ်သည်။
4 LG G2 ကို Android Lollipop သို့ Evomagix Rom နှင့်မွမ်းမံနည်း
ဤနည်းလမ်းသည် LG G2 ကို Android Lollipop သို့အဆင့်မြှင့်တင်ရန်အဘယ်ကြောင့်အကောင်းဆုံးနည်းဖြစ်သည်။
ဒီပို့စ်ရဲ့ခေါင်းစဉ်မှာဘယ်လောက်အထိဖတ်နိုင်လဲ၊ ကျွန်ုပ်အတွက်တော့ LG G2 ကိုတရားဝင် Android Lollipop သို့အဆင့်မြှင့်တင်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အများစုအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောပြုပြင်ထားသော Root and Recovery ကိုထိန်းသိမ်းခြင်းအပြင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်မူရင်း LG ထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောလုပ်ဆောင်ချက် Rom ရှိမည် နှင့် OTA မှတစ်ဆင့် ROM ဗားရှင်းအသစ်များသို့အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း၊ သို့မဟုတ်သင့်လျော်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ပါက၎င်းကိုအခြားတစ်ခုအတွက်ပြောင်းလဲနိုင်ခြင်းမရှိသောစဉ်း စား၍ မရပါ။
LG G2 တစ်ခုရှိသည် D802, D805 သို့မဟုတ် D806.
ရပြီ TWRP Recovery ဖြင့်အမြစ်တွယ်ပြီးပါပြီ.
တစ်ဦးရှိ nadroid backup လုပ်ထား သင်၏လည်ပတ်မှုစနစ်တစ်ခုလုံး၏။
ရှိ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ applications များအပေါငျးတို့သ backup လုပ်ထား မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်ကတည်းကငါတို့ရှိသမျှသည်ဆုံးရှုံးပါလိမ့်မယ်။
LG G2 settings မှ USB debugging ကို enable လုပ်ထားသည်။
ဖိုင်များလိုအပ်သည် Evomagix မှ Rom ခံစားမှုကြောင့် LG G2 ကို Android Lollipop သို့အဆင့်မြှင့်ပါ ဤ Zip သုံးမျိုးအားဒေါင်းလုပ်ချရန်ကန့်သတ်ထားသည်။
TWRP ပြန်လည်နာလန်ထူ ၂.၈.၁။ ဤ link မှနေ၍ ကျွန်ုပ်တို့ TWRP ၏နောက်ဆုံးပေါ် Bump version ကိုပြုပြင်ထားသော Recovery ကို download လုပ်၍ လိုအပ်သည် ဤ Android Lollipop Rom ကို Evomagix မှ flash လုပ်ခြင်း.
BootloaderKK ကျွန်တော်တို့ရဲ့ terminal ကိုမော်ဒယ်နှင့်သက်ဆိုင်သည်။ အဘို့ D802 ကိုကလစ်နှိပ်ပါ ဒီမှာ, D805 ကိုကလစ်နှိပ်ပါ ဒီမှာ D806 ကိုကလစ်နှိပ်ပါ aquí။
LG ၏ v30E ကိုအခြေခံသည့်တရားဝင် Evomagix Android Lollipop Rom.
ပြီးတာနဲ့ကျနော်တို့ရန်လိုအပ်သောဖိုင်သုံးခုရှိသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ LG G2 ၏ Android Lollipop ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း၎င်းတို့ကို USB OTG မှတစ်ဆင့်တပ်ဆင်ရန် Pendrive သို့ကျွန်ုပ်တို့ကူးယူပါမည် (အကြံပြုသည်)သို့မဟုတ် LG G2 ၏အတွင်းပိုင်းမှတ်ဉာဏ်တွင်ဤမှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာရန် Recovery Mode ကိုပြန်လည်စတင်လိမ့်မည်။
LG G2 ကို Android Lollipop သို့ Evomagix Rom နှင့်မွမ်းမံနည်း
ရဲ့ option ကိုသွားကြကုန်အံ့ Install ပြီးတော့ငါတို့ install လုပ်ခဲ့တယ် TWRP ပြန်လည်နာလန်ထူ ၂.၈.၁ မည်သည့် Wipe မပါဘဲ။
ငါတို့သွားမယ် reboot ပြီးတော့ငါတို့ရွေးလိုက်တယ် Recovery Mode ထဲဝင်ပါ.
Wipe option ကိုသွားပြီး Wipe အားလုံးကိုရွေးပါ။ စုစုပေါင်း5Wipes ရှိလိမ့်မယ်။ သင်ရွေးချယ်သောသူတို့ကို LG G2 ၏ internal memory မှ Rom ကိုတပ်ဆင်ခြင်းဖြင့်ဖြစ်သည် Internal Stipe Wipe ကိုမမှတ်သင့်ပါ.
ရွေးချယ်ထားသော Wipes များပြီးစီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်တို့သည် option သို့သွားပါ Install နှင့် Evomagix Android Lollipop Rom ၏ zip ကိုရွေးပါ။ ၁၀ မိနစ်ခန့်ကြာသောမှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်လုပ်ဆောင်မှုပြီးဆုံးသွားသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည် terminal ကိုပြန်လည်စတင်တော့မည်မဟုတ်ပါ။ LG G2 မော်ဒယ်နှင့်အညီ KK Bootloader ကို flash လုပ်ရန်ပင်မ Recovery စာမျက်နှာသို့ပြန်သွားပါမည်။
Install option နှင့် KG Bootloader ကို LG G2 model နှင့်အညီရွေးချယ်ပါ။
ဤအရာဖြင့်သင်တရားဝင် Android Lollipop သို့အဆင့်မြှင့်တင်ပြီးဖြစ်သည် ဤ LG G2 အတွက်အကောင်းဆုံးသော Roms များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်, အ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် Evomagix အသင်းမှ Rom ၎င်း Rom သည်တရားဝင်အခြေပြုထားသည့် LG 30e ထက်ပင်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » LG » LG G2 ကိုတရားဝင် Android Lollipop သို့အဆင့်မြှင့်တင်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း
109 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
အဆိုပါ rom ၏ link ကိုပြီးသားပြaticနာဖြစ်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့သည့်တစ်လခန့်က LG G2 သည် rom 802 ဖြစ်သည်ဟု ဆို၍ ဆဲလ်ဖုန်းများအားလုံးကို China rom နှင့် briquett လုပ်ထားသော rom ကိုထုတ်ဝေသည်။ ROM အတု၏ချိတ်ဆက်မှုကိုသူလက်ခံထားသည့်နေရာ၏နှေးကွေးမှုကြောင့်နာရီပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပြီးလူသိရှင်ကြားပြည့်နှက်ခဲ့သည်။ သံသယဖြစ်ဖွယ် !!!
သူငယ်ချင်းဖြစ်သူပြproblemနာဘာမှမရှိဘူးလို့ပြောရင်၊ ငါကိုယ်တိုင် install လုပ်ထားတာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်။
ငါ့သူငယ်ချင်း၊ ငါ Cloudy G2.1 ကို install လုပ်ပြီး Boatloader KK ခြေလှမ်းကိုငါလုပ်ခဲ့တယ်။ ငါ LG logo ကိုထပ်ခါထပ်ခါမြင်သောကြောင့်ငါပြန်လည်ထူထောင်ရေးကိုရိုက်ထည့်နိုင်လျှင်မည်သို့ဖြေရှင်းနိုင်မလဲ
Francisco ကနံနက်ခင်းအချိန်မှာပြသနာတစ်ခုရှိတယ်၊ ငါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းလုပ်ခဲ့တယ်။ ဆဲလ်ကိုငါစဖွင့်တဲ့အခါမှာအော်ပရေတာနဲ့မဆက်သွယ်ဘူး၊ ဒါကြောင့်ငါထပ်ခါတလဲလဲထပ်တူပဲဖြစ်နေတယ်၊ ​​အခုမှငါ recovery မလုပ်နိုင်တော့ဘူးလို့ twrp ကပြောပါတယ်။ ဖုန်းကိုမထောက်ပံ့ဘူး၊ ဖုန်းပြန်လည်ရယူရန်ကျွန်ုပ်မည်သို့လုပ်ရမည်နည်း။
လူးဝစ် Diaz T က ဟုသူကပြောသည်
Francisco က။ မေးခွန်းတစ်ခု။ ဆဲလ်အချက်ပြမှုသည်ကျွန်ုပ်အပေါ်သို့တက်လာပြီး၎င်းသည် baseband မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ဖြင့်ဖြေရှင်းခြင်းဖြစ်သည်ဟုပြောခဲ့သည်၊ ကျွန်ုပ်မည်သို့လုပ်ရမည်နည်း။
Luis Diaz T ကိုပြန်ပြောပါ
Mauricio leandro ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းသောည francisco ကျွန်ုပ်သည်အောက်ပါပြhaveနာရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည် bootloader kk lg g2 d805 ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်ကြိုးစားသော်လည်း mega link ပြတ်တောက်သွားသည်။ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။
mauricio leandro အားပြန်ပြောပါ
မိုးအုံ့ g3 2.2 အဆင့်တွင်အလုပ်လုပ်ပါသလား။
ကျွန်တော့်အတွက်တော့ပိုကောင်းတာကတော့တရားဝင် Open Europe 2E ကိုအခြေခံထားတဲ့ Rom ဖြစ်လို့ G30 ရဲ့မူလလုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးဟာ enable လုပ်ထားတယ်။
အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့်ဘက်ထရီ၊ Roms Stock Kit Kat အဆင့်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပင်ပိုကောင်းသည်။
ငါ့မှာ Jb ရှိရင်အလုပ်လုပ်လား။
ဟုတ်ပါတယ်၊ KitKat Bootlader ကို flash လုပ်လိုက်တာပဲ။
ယောနသန်သည် Sanchez ဟုသူကပြောသည်
စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ ဒီ d800 att အတွက်မဖြစ်သေးပါဘူး။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုတရားဝင် Lollipop သို့အဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်းအမှန်တရားမှာအောက်ဖော်ပြပါစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် lags နှင့် bug အမြောက်အများကိုသတိပြုမိပြီးကျွန်ုပ်သည် Lollipop ဖြစ်လျှင်ကျွန်ုပ်မည်သို့လုပ်နိုင်သနည်း
jonathan sanchez အားပြန်ကြားပါ
ပြီးပြည့်စုံသော, ထိုအလှူငွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါနောက်တစ်ခု D805 ပေါ်တွင် install လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်ုပ်တွင် Lollipop ROM (အထူးသဖြင့် v30d) ရှိပြီးသားဖြစ်ပါက၎င်းသည်ကျွန်ုပ်သည် Kit kat bottloader ကို flash လုပ်ရန်လိုအပ်ပါသလား။ lollipop installed ရှိခြင်း။
ဟုတ်ပါတယ်။ Kit-Lollipop ကိုအခြေခံပြီး Rom ကနေစပြီး bootloaderKK flashing ရဲ့အဆင့်ကိုကျော်သွားနိုင်တယ်။
ငါ့မှာ Cloudg2 2.2 ရှိတယ်
ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်တစ်ခုတည်းသောအရာမှာကျွန်ုပ်တို့သည် JB Rom မှစတင်ပါက BootloaderKK ကို ဦး စွာ flash ရမည်။
သို့သော်လည်းကျွန်ုပ်တွင် kitkat 4.4.2 ရှိပြီးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် boot သို့မဟုတ် flash band evomagix ကိုတပ်ဆင်တော့မည့်အချိန်ကိုငါ Flash လုပ်မလုပ်သိရန်လိုသည်။
အကယ်၍ တပ်ဆင်ခြင်းကသင့်အားပြproblemsနာများပေးခဲ့လျှင် Recovery Mode ကိုပြန်လည်စတင်ခြင်းနှင့် BootloaderKK ကို flash လုပ်ခြင်းဖြင့်၎င်းသည်မလုံလောက်ပါ။
Francisco နံနက်ခင်းပါ၊ ဒီ ROM ထဲမှာဘယ်လိုကင်မရာလဲ၊ RadioFm ရှိရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
၎င်းသည်မူရင်း LG Rom ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် LG ၏မူလအက်ပလီကေးရှင်းများအားလုံးပါ ၀ င်သည်။ မူလကင်မရာ၊ FM ရေဒီယို၊ Quick Remote, Quick Memo + နှင့် ၀ င်းဒိုးပါအဖုံးများအတွက်လျင်မြန်သော ၀ င်းဒိုးလုပ်ဆောင်နိုင်မှုများပင်ပါဝင်သည်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျေးဇူးပြု၍ ဒီ ROM ရှိကင်မရာသည်ဘယ်လောက်ရှိသလဲ၊ RadioFm ရှိရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဖာနန်ဒို Adrian Campazzo ဟုသူကပြောသည်
ဟီဆန်ဇီကို၊ ဒီ rom ကိုတပ်ပြီးတဲ့နောက် KK ကိုပြန်သွားရတာအရမ်းခက်တယ်။ မင်္ဂလာပါ။ ကျေးဇူးပါ။
ဖာနန်ဒို Adrian Campazzo အားတုံ့ပြန်ပါ
Rom ကို internal memory သို့မဟုတ် USB OTG သို့ကူးပြောင်းရုံသာသင်လုပ်ခဲ့သကဲ့သို့ဖြစ်သည်။
ငါ evomagix ဖိုင်ကိုကူးရန်ကြိုးစားသည်၊ ကျွန်ုပ်အမှားတစ်ခုရရှိသည်၊ ကိရိယာသည်တုံ့ပြန်ခြင်းကိုရပ်တန့်သည်သို့မဟုတ်ဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်သွားသည်။ rom ကို terminal ၏ internal memory သို့၎င်းမည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ဆိုသည်ကိုလွှဲပြောင်းရန်ကျွန်ုပ်အတွက်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ၎င်းသည် USB debugging တွင်ရှိပြီးဖြစ်သည်။ ငါပြန်ဖွင့်ပြီ၊ USB ကြိုးကိုပြောင်းလဲလိုက်ပြီ။
ကြည့်ပြီးပြီ အဆိုပါပြproblemနာကို download လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါဒါကိုနှစ်ခါဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးပြီ။ ၁.၃၃ gb အလေးချိန်ရှိရင်အကြီးစားဖိုင်က ၅၀၀ mb အလေးချိန်ရှိတယ်။ ပြီးတော့အဲဒါကိုပြproblemနာမရှိဘဲဒေါင်းလုပ်လုပ်ပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာတော့ငါ pc ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်တဲ့အခါတ ၀ က်အလေးချိန်ရှိတယ်။ ငါက chrome အစားအော်ပရာသို့မဟုတ် mozilla နှင့်အတူ download လုပ်ပါရန်ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။
ငါပြwithနာမရှိခဲ့ဘူးသောနေ့ရက်ကာလ၌၎င်းကို Chrome ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ကောင်းမွန်စွာတပ်ဆင်ပြီး d805 bootloader ကိုတပ်ဆင်ပြီးယခုကြည့်ပါက ၄ င်းသည် gg မဟုတ်ဘဲ h + သာဖြစ်သည်။ ထိုအခါငါက d4 မဟုတ် d802 ကြောင်းရ။ ဘာဖြစ်တာလဲ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သိပြီး 4g ကိုယူကြည့်ပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်နားမလည်ပါက၎င်းသည်လက်တင်အမေရိကမှ d802 ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ယခင်ကပေါ်ပေါက်ခဲ့သည့် d805 ဖြစ်ပုံရသည်။
Cristian Camilo Correa Lezama ဟုသူကပြောသည်
၎င်းသည်လက်တင်အမေရိကရှိအချက်ပြမှုတစ်ခုကိုရရှိရန်အတွက်အကောင်းဆုံးမဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်အတွက်များစွာကျပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် acura နှင့်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်မည်
Cristian Camilo Correa Lezama ကိုပြန်ပြောပါ
d805 နှင့် d806 bootloaders များနှင့်သက်ဆိုင်သောဖိုင်များသည်ဤမော်ဒယ်များအတွက်အခြေခံအကျဆုံးဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့် d802 botloader သည်မော်ဒယ်သုံးမျိုးလုံးအတွက်သက်ဆိုင်ပါသလားသို့မဟုတ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွင်အမှားများပါပါသလား။
အောင်နိုင်သူအား Manuel အားပြန်ပြောပါ
မာကို JKF (@MarcoJKF) ဟုသူကပြောသည်
Mmmmm, ဒီအရာရှိကဘာလဲ ငါတို့လိမ်နေတာကိုရပ်ကြည့်ရအောင်။
Marco JKF သို့ပြန်သွားသည် (@MarcoJKF)
ငါ၎င်းကိုထည့်ပြီးပြီ၊ ယခုကျွန်ုပ်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်၊ သို့သော်၎င်းတွင်သင်တင်ပို့လိုက်သောဖန်သားပြင်များနှင့်တူညီသောအင်တာဖေ့စမရှိ Navigation bar ပေါ်ရှိခလုတ်များကိုသေးငယ်အောင်ပြုလုပ်ပြီး status bar ကိုပြောင်းချင်ပါတယ်။ အဲဒါကိုဘယ်လိုလုပ်နိုင်လဲ။
ငါမှာ CWM ပြန်လည်နာလန်ထူနှင့်အတူမိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခြင်း806၌ငါနေ၏ d2၊ TWRP ကို ​​flash လုပ်ရန်လိုအပ်ပြီး BK BootloaderKK ကိုကျော်ပြီးကျော်သွားရမည်ဖြစ်သည်။
TIGO COLOMBIA တွင်ပြitနာမရှိဘဲ D805 တွင်ထည့်သွင်း။ 4G ကိုရယူပါ။ မင်္ဂလာပါ။
လူးဝစ်၊ ခင်ဗျားဘယ်လိုလုပ်ခဲ့လဲ၊ ငါ့မှာအုတ်တံတိုင်းခတ်နေပုံရတယ်။ ငါ့ကိုကူညီနိုင်မလား?
Oscar Camargo အားပြန်လည်ပြောပြပါ
ငါ D802 ကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်လုပ်ခဲ့ပြီး၎င်းသည် boot ကွင်းဆက်တွင်ရှိနေခဲ့သည်
စုံစမ်းမှုတစ်ခုအရကျွန်ုပ်သည် D806 ၌ kitkat ရှိပြီးမကောင်းသောလုပ်ဆောင်မှုအသစ်တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်၏ internal memory ကို 16gb အစား 32gb တွင်ထားခဲ့ပါသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်ဗီဒီယိုတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း wipes ကိုလုပ်ပြီး lollipop ကို install လုပ်သောအခါမူရင်း 32gb အခန်းကန့်ကိုပြန်လည်ရယူနိုင်မည်လား။
LessLoz Aguirre ဟုသူကပြောသည်
သူငယ်ချင်း၊ အော်ပရေတာဆီကနေငါမအကြောင်းကြားဘူး၊ ဘာဖြစ်နိုင်လဲ နီကာရာဂွာမှနှုတ်ခွန်းဆက်သ !!
LessLoz Aguirre သို့ပြန်သွားပါ
ကျွန်တော့်မော်ဒယ် D805 ... KK Boatloader ရဲ့ကိစ္စလား။
ငါပြီးသားဖြေရှင်းပြီးပြီ, ငါနောက်တဖန် baseband flash ခဲ့ရသည်နှင့်အရာခပ်သိမ်းအဆင်ပြေ !!! 😀
သူငယ်ချင်း၊ ငါထပ်တူပြproblemနာရှိတယ်၊ အော်ပရေတာကငါ့ကိုမပြဘူး၊ Baseband ကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ။
သူငယ်ချင်း၊ မင်းဘယ်လိုလုပ်ပြီးဘယ် baseband ကို flash လုပ်ခဲ့တာလဲ။ လေးစားပါတယ်
ငါ Rom ကိုချွတ်ယွင်းလိုက်ပြီးအခုဖုန်းက restart မလုပ်တော့ဘူး။ LG အိုင်ကွန်သည်ထွက်လာသည်၊ ပိတ်ပြီး၎င်းကိုအစဉ်မပြတ်ပေါ်လာသည်။
Edwin rodriguez ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါသူငယ်ချင်း၊ ကျွန်ုပ်အား LG logo ထက် ကျော်လွန်၍ မတူသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်နှင့်အတူဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ လိုဂိုအမှတ်အသားပြန်ပေါ်လာသည့်အခါ power ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ power + vol ကိုချက်ချင်းနှိပ်လိုက်ပါ။ ၎င်းသည်ပြန်သွားပြီးပိတ်သွားမည်။ လိုဂိုပြန်ပေါ်လာသည်နှင့် power + vol ကိုထပ်နှိပ်လိုက်ပါ။ အဲဒီမှာသင်ခွင့်ပြုချက်ပေးပြီး option ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ အဲဒီနောက်ဟုတ်ကဲ့၊ အဲဒါပြန်လည်ထူထောင်ရေးကိုဆက်လုပ်ပါ။ Rom အလုပ်လုပ်နေသောအချိန်တွင်ဆော့ဖ်ဝဲလ်အချက်အလက်ကိုကြည့်သောအခါပိတ်ဆို့ခြင်းအကြောင်းတစ်ခုတည်းဖြစ်သည်။
Edwin Rodriguez အားပြန်ပြောပါ
သူငယ်ချင်း၊ ငါ REcovery ကိုဝင်နိုင်ပြီ။ LG logo မပေါ်လာအောင်ဘာလုပ်ရမလဲ
မက်တီ trelew ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ တစ်စုံတစ်ယောက်မှဖြစ်ပျက်ခဲ့လျှင်ကျွန်ုပ်မပြောနိုင်ပါ။ Rom anda de Diez, ကျွန်ုပ်သည်ကြာမြင့်စွာသောအမှားများကိုဖန်သားပြင်များကိုဖမ်းယူသောအခါပြသထားသောအမှတ်အသားပါသောရုပ်ပုံကိုကျွန်ုပ်ကြည့်သောအခါပေါ်လာသည်၊ ကျွန်ုပ်မလုပ်နိုင်ပါ။ ဖိုင်များသို့မဟုတ်ဖိုင်များကို whatsapp send မှတဆင့် download လုပ်၍ wifi အချက်ပြမှုပြတ်တောက်သွားသည်။ မည်သူမဆိုထိုပြfixနာကိုမည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကိုသိသလား။
Maty Trelew အားပြန်ပြောပါ
Michael Rivas ဟုသူကပြောသည်
သူငယ်ချင်း D801 မှာမင်းရနိုင်ပါသလား။
Miguel Rivas အားပြန်ပြောပါ
သူငယ်ချင်းများ၊ ကျွန်ုပ်ခြေလှမ်းတိုင်းကိုလိုက်ပြီးကျွန်ုပ်၏ဖုန်းသည် boot loop တွင်စွဲနေပြီး၎င်းသည်ထိုနေရာမှထွက်မလာပါ။ ကျွန်ုပ်သည်အရာအားလုံးကိုကြိုးစားပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည် probe power + vol ကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာမဖြေရှင်းနိုင်ပါ၊ သိုမဟုတ်တစ်ခုခု၊ ဤသင်ခန်းစာများသည်အမျိုးအစားအစီအစဉ်ခရွေးစရာများကိုမကိုင်တွယ်ပါ
Miguel Jaenz ဟုသူကပြောသည်
စမ်းသပ်မှု - Pow + Vol- ______ (v +) + (v-)
ပိုဆိုးတာကတော့ stock rom ထည့်သွင်းပြီးဖုန်းကိုပြန်ကောင်းလာတယ်။ အဲဒီနောက် rom စာမျက်နှာကိုဒီစာမျက်နှာကနေထပ်မံတပ်ဆင်ဖို့ကြိုးစားတယ်၊ ဖုန်းကလုံးဝပိတ်သွားတယ်၊ twrp က / အချက်အလက်တွေမသိဘူး၊ ဒါကြောင့်ငါပြန်မရနိုင်ဘူး။ မှားတယ် !!
Lenovo A288t 2.3 မှ rom ကိုမည်သို့ရနိုင်မည်နည်း။ ကျွန်ုပ်ရှာဖွေသည်ဘာသာစကားပြောင်းလဲရန်ရှာမတွေ့ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Rom သည်အလွန်ကောင်းသည်။ ကျွန်ုပ်၏ lg g2 D806 အတွက်စာတောင်းခံရန်ခြေလှမ်းများကိုလိုက်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ဇိမ်ခံကားဖြစ်သည်။ သို့သော်တစ်ပတ်အကြာတွင်ဆဲလ်ဖုန်းကိုပုံမှန်သော့ခတ်တိုင်းဖန်သားပြင်ကိုသော့ဖွင့်ချင်သည်။ degraded and colours Runs, ဒါပေမယ့်ဒုတိယပဲရှိပေမယ့်ပြီးပြည့်စုံတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်။ ဘာဖြစ်နိုင်လဲ ??? system ကိုထိခိုက်သောမည်သည့် app ကို? ဘာလို့လဲဆိုတော့အစပိုင်းမှာတော့အဲဒါကိုငါမလုပ်ခဲ့၊ ငါဆဲလ်ဖုန်း၊
ပြubleနာ! နောက်ဆုံး bootloader မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ဖြစ်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်သည်စဉ်ဆက်မပြတ်ပြန်လည်လည်ပတ်မှုကွင်းဆက်၌ကျန်နေခဲ့သည်
ငါက bootloader ကိုသို့မဟုတ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး mode ကိုသို့မသွားဘူးပြောမေ့လျော့။
Kalabras ကိုကျွန်တော့်မေးလ် FB ဆီရေးဖို့ကူညီမယ် cristianzao@live.com ငါ့ကိုရှာကြလော့
Francisco ရဲ့အကူအညီကြောင့် ROM ကအရမ်းကောင်းတယ်။ ငါအရမ်းကြိုက်တယ်၊ Cloudy 2.1 ကလာတယ်။ အဆင့်တွေကိုလုပ်တယ်၊ KKBootloader ကို download လုပ်ပြီး TWRP 2.8.6.1 ကို install လုပ်တယ်။ အဆင့်အားလုံးကိုလုပ်လိုက်တယ်။ , ဒါပေမယ့်အံ့သြစရာကောင်းတာကဒီအမှတ်တံဆိပ်ဟာထပ်ခါထပ်ခါပေါ်လာတာကိုကျွန်တော်အံ့သြမိတယ်၊ ပြီးတော့ကျွန်တော့်ရဲ့ cable နဲ့ pendrive ကိုယူပြီး KKBootloader ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီး ၂.၈.၅.၁ install လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာငါ evomagic ကို install လုပ်ပြီး KKBootloader ကိုကျော်လိုက်ပြီးပြီးပြည့်စုံတဲ့ boot တက်သွားခဲ့တယ်။ အရေးကြီးသောမှတ်စုတစ်ခု၊ ပုံမှန်နည်းလမ်းထက်ကွဲပြားသောနည်းဖြင့်ကျွန်ုပ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးစနစ်ထဲသို့ဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့သည်။
power + vol down..the အမှတ်အသားသည်ကျွန်ုပ်တို့လွှတ်လိုက်ပြီးပထမဆုံး vol + ကိုလျင်မြန်စွာနှိပ်ပြီးနောက်ဖိအားကို ဆက်၍ အသုံးပြုပါ။
ထို kitkat bootloader သည် baseband lollipop နှင့် ပို၍ ဆင်တူသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ပီရူးနိုင်ငံမှဖြစ်ပြီး၊ movistar android မှ d805 v20a မော်ဒယ်လ် ၄.၄.၂ ဤသင်ခန်းစာသည်ကျွန်ုပ်၏မော်ဒယ်အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်မဖြစ်နှင့် အကယ်၍ ကျွန်ုပ်လုပ်ခဲ့လျှင်ကျွန်ုပ်မည်သို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမလဲ။ ရှာတွေ့နိုင်တယ်
ကျွန်တော်ဒါကိုမအကြံပြုပါဘူး ကျွန်ုပ်သည်ပီရူးမှဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တွင် movistar d805 model (Android 4.4.2) ရှိပြီး ROM ကောင်းမွန်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တွင် BaseBand နှင့်ပြသနာများရှိပြီးကျွန်ုပ်သည်မိုဘိုင်းကွန်ယက်သို့ဝင်ရောက်ခွင့်မရှိပါ။ ထို့အပြင်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုယခု d802 အဖြစ်တွေ့ရှိပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည် IMEI ကုဒ်ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ပြီး၎င်းသည်ပိုမိုအပူပေးသည်ကိုသတိပြုမိသည်။ ငါ BaseBand ကိုပြုပြင်ရန်ကြိုးစားနေသော်လည်းကျွန်ုပ်သည်အနည်းငယ်စိတ်ပျက်မိသည် (ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်စနစ်နှင့်ကျွန်ုပ်၏လျှောက်လွှာများကိုမိတ္တူကူးယူခဲ့သည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်)
Juanjo Burgos ဟုသူကပြောသည်
ငါ့မှာ gg g2 ပေ d800 ရှိတယ်။ ပိုကောင်းတဲ့ဘက်ထရီကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အတွက် lollipop (သို့) kitkat ကိုဘာတွေအကြံပြုလိုပါသလဲ။
Juanjo Burgos ကိုပြန်ပြောပါ
ငါအခန်းတစ်ခန်းကိုခဏသုံးနေတယ်။ မနေ့ကငါဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာဒေါင်လိုက်အနက်ရောင်မျဉ်းကြောင်းနဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်ပြaနာတစ်ခုချလိုက်တယ်။ အဲဒါကအပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုကိုတပ်ဆင်နိုင်ပြီး ၃၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထက်မကျော်လွန်ဘူး၊ ဆဲလ်ကိုငါသုံးတယ် (LG G35) D2) သည်လူမှုကွန်ယက်များအတွက်မဟုတ်သလို cel နှင့်မကစားပါကမည်သို့ဖြစ်နိုင်သနည်း ??????
မင်္ဂလာပါ၊ ကောင်းသောနေ့မွမ်းမံပါနှင့် sim သည်ကျွန်ုပ်အားအသိအမှတ်မပြုပါလား d806 ရှိခဲ့ပါတယ်
ဟိုင်းမင်ဘယ်လိုနေလဲ ?? ငါ sim ကငါ့ကိုအသိအမှတ်မပြုသောပြproblemနာရှိသည်, ငါ D806 ရှိသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၌ D805၊ ကျွန်ုပ်၌တိမ်တိုက် v2.2 ရှိခဲ့ပြီး၎င်းကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရန်အဆင့်များကိုလိုက်နာခဲ့ပါသည်။ ၇ ရက်ခန့်ကြာပြီးအရာနှစ်ခု မှလွဲ၍ အရာအားလုံးအလွန်ကောင်းမွန်နေပါသည်။ အလိုအလျောက်လည်ပတ်မှုကိုသက်ဝင်သောအခါတစ်ခါတစ်ရံတွင်မျက်နှာပြင်မပါဘဲကျိုးပဲ့သွားသည်။ ဖုန်းကစောင်းနေတယ်။ နောက်တစ်ခုကကင်မရာကဇောက်ထိုးဖြစ်နေပြီးဓာတ်ပုံတွေကောင်းကောင်းမရိုက်နိုင်ဘူး။ ကျေးဇူးပြုပြီးကူညီပါ
အလွန်ကောင်းသောအလှူငွေကျေးဇူးတင်ပါတယ် !! slds
မင်္ဂလာပါ၊ TWRP ကို ​​install လုပ်စဉ်တွင်ဖုန်းသည်မဖွင့်တော့ဘဲအပြာနှင့်အစိမ်းရောင်အလင်းရောင်အလင်းရောင်သာလင်းလက်နေပါမည်။
Hernan Pereira ဟုသူကပြောသည်
yeah yea !!! ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ LG G2 805 အတွက်ကောင်းမွန်သောအလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်မက္ကဆီကိုမှဖြစ်သည်။
Hernan Pereira အားပြန်ပြောပါ
Ag ဇာက်သည် Agundez Zarate ဟုသူကပြောသည်
Hernan, အော်ပရေတာသင်တို့အဘို့အလုပ်လုပ်ခဲ့ ..
Isaac Agundez Zarate ကိုပြန်ပြောပါ
လူကိုငါအကူအညီလိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ 805 တွင်လုပ်ခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်တွင်အချက်ပြမှုမရှိပါ
သင် baseband flash လုပ်ခဲ့သလား။
အော်ပရေတာနဲ့ဘာကိုဆိုလိုပါသလဲ မင်းရဲ့ပြproblemနာကိုမင်းဖြေရှင်းခဲ့တာလား ယခုအချိန်အထိဖြေဆိုခြင်းအတွက်စိတ်မကောင်းပါဘူး
ငါလုပ်ပြီးပြီ၊ အရာအားလုံးအဆင်ပြေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်ငါမှာမေးခွန်းတစ်ခုရှိတယ်။ ဘာကြောင့်ဆက်တင်များ ၀ င ်၍ ဖုန်းနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်ကိုတွေ့သောအခါကျွန်ုပ်ကို D802 လို့ D805 လို့ခေါ်သနည်း။ ဆော့ဖ်ဝဲလ်ဗားရှင်းမှာလည်း 5.0.2 ကိုကျွန်တော်အရိပ်ရနေတယ်၊ ​​Lollipop ထွက်လာအောင်ငါအကြိမ်ကြိမ်မပေးနိုင်ဘူးလား။
ငါ D802 ဖြစ်လျှင်ယခုငါ D805 သို့ပြောင်းသလဲ အမှားဘယ်မှာလဲ ……… TWRP ကို ​​805 အတွက်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာထွက်ပေါ်လာတဲ့ option က“ 802/5/6” ဖြစ်ပြီး download လုပ်ရင် 802 အဖြစ် download လုပ်မှာဖြစ်တယ်။ ငါဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာမသိဘူး၊ ပြthat'sနာကဒါပဲလို့ထင်တယ်၊ ဒါပေမယ့် rom ကငါ့ကိုပြaနာမပေးဘူး
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ ကျွန်ုပ်မှာ D805 ပါ။ ခြေလှမ်းအားလုံးကိုလှမ်းခဲ့ပေမယ့်အော်ပရေတာရဲ့အချက်ပြမှုမဖွင့်နိုင်ဘူး၊ တစ်ယောက်ယောက်ကသင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့အညီငါ့ကိုကူညီပေးနိုင်မလား။ ငါပီရူးကပါ။
Alfredo၊ ကျွန်တော်ဒီကို D 805 မှာလုပ်ခဲ့တယ်၊ အဲဒါကကျွန်တော့်ကိုကွန်ယက်မှာဘာပြwithနာမှမရှိခဲ့ဘူး၊ မင်းရဲ့အမှားက baseband ကိုမနှောက်ယှက်တာလို့ထင်တယ်။
အဲဖရက်ဒို၊ ငါနဲ့အတူတူပါပဲ၊ ငါလုပ်ခဲ့တာမှန်သမျှလုပ်ခဲ့တယ်။ အချက်ပြမှုကငါ့ကိုမဖမ်းဘူး
ငါ LG G2 d805 ရှိသည်။
ဒီကိစ္စကိုစမ်းသပ်ခဲ့တဲ့ချီလီကတစ်စုံတစ်ယောက် .. အချိန်အကြာကြီးငါ lg l5 ကိုအဆင့်မြှင့်ခဲ့ပြီးအချို့ကကျွန်ုပ်သည်အချက်ပြမှုကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ်လို့ပြောကြတယ် .. အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိဒီအဖြေကို lg ထောက်ခံမှုတောင်းခဲ့ရတယ် အကယ်၍ ချီလီမှတစ်စုံတစ်ယောက်က ကျေးဇူးပြု၍ မင်းကိုပေးပါ ထင်မြင်ချက်
အာဂျင်တီးနားအတွက် g2 d806 အပေါ်ပြီးပြည့်စုံသောအလုပ်လုပ်သည်။ ငါစာ၏ခြေလှမ်းများနောက်တော်သို့လိုက်နှင့်ပြည့်စုံမှ 2g 3g နှင့် 4g ရုပ်သိမ်း။
kitkat နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဆဲလ်ဖုန်းစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်လာသည်။ antutu benchmarkck ဖြင့် 40900 သို့ရနိုင်ပြီး quadrant 25000 ပါ။
ဝမ်းနည်းပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်းအာဂျင်တီးနားမှပါ။ ဗားရှင်း ၂.၈.၁ ကိုမတွေ့သောကြောင့်၊ အရာအားလုံးအဆင်ပြေမလား၊ မကြာသေးမီက twrp နဲ့ထည့်သွင်းလို့ရမလားဆိုတာကျွန်တော်သိချင်ပါတယ်။
လူးကပ်စ, သင် TWRP သင်အသုံးပြုခဲ့တာလဲ
Sergio Ruiz ကိုပြန်သွားပါ
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ ဒီတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရရင်အရမ်းရိုးရှင်းတယ်၊ ပထမ ဦး ဆုံးဖုန်းကအသစ်ဖြစ်နေတယ်။ ၎င်းသည်အလွန်မြန်ဆန်စွာသွားပြီးဘက်ထရီကိုကျွန်ုပ်မကျေနပ်လျှင်ယခုမယုံနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်သွားသည်။ ငါယခုတိုင်အောင်ပေးသောတူညီသောအသုံးပြုမှုနှင့်နီးပါး 20% ပိုပြီး။ ကျေးဇူးထပ်တင်ပါရစေ!
ဟင် Fransisco၊ အာဂျင်တီးနားမှကျွန်ုပ်၊ ကျွန်ုပ်၌ lk h2 d806 kitkat နှင့်အတူ၊ အမှန်တရားမှာကျွန်ုပ်သည် rom ကိုချစ်မြတ်နိုးသော်လည်း twrp 2.8.1 မော်ဒယ်ကိုရှာမတွေ့နိုင်ပါ။ မော်ဒယ်လ်နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုကကျွန်ုပ်၏ဆဲလ်ဖုန်းကိုအချက်ပြခြင်းမရှိဘဲထားခဲ့လို့လား။
ဟယ်လို။ အရာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်၏ d806 တွင်ကောင်းစွာ install လုပ်ပါ။ ပြproblemနာက၎င်းသည် signal ကိုအမြဲတမ်းဆုံးရှုံးသွားပြီးဘက်ထရီကိုအလွန်လျှင်မြန်စွာယိုစီးစေသည်။ ကျန်တဲ့အရာအားလုံးကောင်းတယ်၊ ဒါအတွက်ဖြေရှင်းနည်းရှိသလား။ ငါအာဂျင်တီးနားကနေဝန်ထမ်းများရှိသည်
ကျွန်ုပ်၎င်းကိုအသုံးပြုနေပြီးကျွန်ုပ်၌ရှိသောပြtheနာမှာကျွန်ုပ်တွင်ဒေတာအချက်ပြမှုမရှိခြင်း၊ ၎င်းကိုဆက်သွယ်ရန်ခက်ခဲခြင်း၊ ကျွန်ုပ်သည် ၀ ိုင်ဖိုင်နှင့်ကျွန်ုပ်ဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်သောအခါ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်နှင့်လည်းကြုံတွေ့ရသည်။
လူးဝစ် Diaz ဟုသူကပြောသည်
မိတ်ဆွေ၊ ကျွန်ုပ်မှာ KK မူရင်းရှိလျှင် Bootloader Flash လုပ်ရန်လိုအပ်ပါသလား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Luis Diaz ကိုပြန်ပြောပါ
ယောက်ျားလေးများ, UP ဖတ်ပါ။
Lollipop ကိုတပ်ဆင်ပြီးသည်နှင့်ဆဲလ်ဖုန်းသည်တိုင်းပြည်နှင့်သက်ဆိုင်သော band များကိုတိုးမြှင့်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် D806 အတွက် BootLoaderKK သည် D806 ကိုရောင်းသောinရိယာရှိတီးဝိုင်းများနှင့်ကိုက်ညီသည်။
လူးကပ်စပြောတာကသူဟာအာဂျင်တီးနားမှာအဆင်ပြေနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလှကိုသူမဆီကိုသုံးကြိမ်ပြန်ပို့သွားမယ်။ ဟဟားဟား…ငါကြောက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါထပ်ကစားပြန်ပြီ!
ဆာဂျီယို။ တောင်းပန်ပါတယ်။ အဆင့်တွေကိုကျွန်တော်လုပ်ထားပေမယ့်ကျွန်တော့်ကိုမဖမ်းပါဘူး။ inei ကမခေါ်ပါဘူး၊ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး (သို့) download mode မ ၀ င်ဘူး။
မင်္ဂလာပါ d805 bootloaderkk ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်ကြိုးစားသော်လည်းဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်သွားသည် :)
ငါလုပ်ခဲ့တာကလူတွေဆဲလ်တွေအလုပ်လုပ်တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါ imei ကိုဖျက်လိုက်တယ်။ အကူအညီလိုအပ်တယ်
Juan Carlos Rincon ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ဤ update လုပ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်သည် Wi-Fi ပြသနာများကိုဖြေရှင်းရန်ကျွန်ုပ်အားကူညီပေးပါကဖုန်းဆက်နေဆဲဖြစ်ပြီး WiFi အလုပ်မလုပ်ပါကသင်ပြောပြပါ။ သို့မဟုတ်ဥပမာအားဖြင့်အချက်အလက်များကိုဆက်သွယ်သောအခါ GPS ပိတ်ဆို့ထားသောပြproblemနာ၊ သင်၏အဖြေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
juan carlos rincon အားပြန်ကြားပါ
၎င်းသည်ပြီးပြည့်စုံသောအခြေအနေသို့ရောက်ရှိနေသည်။ သို့သော်မနေ့ကကျွန်ုပ်တွင် wifi နှင့်ပြသနာများစတင်ခဲ့သည်၊ ယနေ့ကျွန်ုပ်ဆက်သွယ်မှုမက်ဆေ့ခ်ျကိုခွင့်မပြုပါ၊ ဝိုင်ဖိုင်ကို activate လုပ်ရန်ကြိုးစားသည်။ WIFi ကိုဖွင့်ခြင်း၊ မဆိုထောက်ခံချက်?
ကောင်းပြီငါလဲကျူတိုရီရယ်ကိုလုပ်တယ်။ ဆဲလ်ဖုန်းကငါ့ကို lg လိုဂိုမပေးလိုက်ဘူး
ခွင့်ပြုပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆဲလ်ဖုန်းများတွင် ROM မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်ကိုလေ့လာခြင်းမပြုလုပ်မှီ၊ သင်ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ယခင်ပို့စ်တွင်ကျွန်ုပ်သည်“ ROM” ကို install လုပ်ပြီးကျွန်ုပ်၏ဖုန်းကိုပိတ်လိုက်သည်။ ROM သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အတွက်သီးသန့်ဖြစ်သည်။ ဆဲလ်ဖုန်းမော်ဒယ်၊ d802 ဆိုလျှင် d805 အတွက်တစ်ခုကိုသုံးမယ်ဆိုရင်စဉ်ဆက်မပြတ် reboot သို့မဟုတ်အုတ်တစ်ခုသို့မဟုတ် fastboot စတာဘာမှဖြစ်မလာနိုင်ဘူးဆိုတာဘာမှန်းမသိနိုင်ပါ။
Adrian ruiz ဟုသူကပြောသည်
Hello Friend! ကျွန်ုပ်တွင် LG G2 kitkat ပါရှိပြီးအသွင်သစ်တစ်ခုကြည့်ချင်ပါသည်။ rom သည်လုံခြုံမှုရှိမရှိ၊ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှမည်သည့်ပြproblemsနာများကြုံတွေ့ရသနည်း။ မိုးတိမ်တစ်ခု၊ bootloader ကို install လုပ်ဖို့လိုသလား။
Adrian Ruiz သို့ပြန်သွားပါ
Francisco ကတစ် ဦး တိုင်ပင်ဆွေးနွေး။ ငါ့မှာ LG G2 d806 kitkat ရှိတယ်။ ငါခြေလှမ်းများနောက်သို့လိုက်, ဒါပေမယ့်ငါ၌ပြproblemနာတစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်နှင့်ငါစက်ရုံ restore လုပ်ဖို့လိုတဲ့အခါငါငါအရင်ကကဲ့သို့ kitkat သို့ပြန်သွားနိုင်ခြင်းမဟုတ်, လက်မှတ်စိစစ်အတည်ပြုကနေအမှားတစ်ခုရတယ်။
ဒါကြောင့်ဒီ ROM ကိုပြန် install လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်။ ဒါပေမယ့် bootloader ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာတော့မသေချာပါဘူး။
twrp link များနှင့် d805 အတွက် BootloaderKK ကျဆင်းနေပြီးကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်
သင့်ရဲ့သော့ခတ် d805 deat အလုပ်မလုပ်ပါဘူး